Photo Gallery Recovery or stagnation? Zimbabwe holds pivotal vote Monday
Former Zimbabwean President Robert Mugabe holds a press briefing at his residence in Harare on Sunday, July 29, 2018, on the eve of the country’s all important elections. Zimbabwe votes Monday in an election that could, if deemed credible, tilt the country toward recovery after years of economic collapse and repression under Mugabe.
Former Zimbabwean President Robert Mugabe, holds a press briefing at his residence in Harare, Sunday, July 29, 2018, on the eve of the country’s all important elections. Zimbabwe votes Monday in an election that could, if deemed credible, tilt the country toward recovery after years of economic collapse and repression under Mugabe.
Grace Mugabe attends a press conference addressed by her husband former Zimbabwe president Robert Mugabe at their residence in Harare, Zimbabwe, Sunday July 29, 2018. Robert Mugabe is speaking to the nation for the first time since stepping down from power in November and less than 24 hours before the country faces a historic vote — the first without him.
Zimbabweans participate in a Sunday church service in Harare, Zimbabwe, Sunday July 29, 2018. Zimbabwe votes Monday in an election that could, if deemed credible, tilt the country toward recovery after years of economic collapse and repression under former leader Robert Mugabe.
Zimbabwean opposition challenger Nelson Chamisa participates in a Sunday church service in Harare, Zimbabwe, Sunday July 29, 2018. Zimbabwe votes Monday in an election that could, if deemed credible, tilt the country toward recovery after years of economic collapse and repression under former leader Robert Mugabe.
An opposition party supporter reacts during Nelson Chamisas last rally in Harare, Saturday, July, 28, 2018. Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa and main challenger Nelson Chamisa held final campaign rallies Saturday ahead of Mondays election in a country seeking to move past decades of economic and poltical paralysis.
Previous articleRecovery or stagnation? Zimbabwe holds pivotal vote Monday
Next articleSpain rescues 123 migrants in the Strait of Gibraltar